Banky Iraisam-pirenena : 45 tapitrisa dolara hanatsarana ny fitantanana | NewsMada
Banky Iraisam-pirenena : 45 tapitrisa dolara hanatsarana ny fitantanana
Nankatoavin’ny Banky iraisam-pirenena, ny 16 novambra teo ny famatsiam-bola 45 tapitrisa dolara tsy averina, ho an’i Madagasikara. Hanohanana hanarenana ny fomba fitantanam-bolam-panjakana io vola io, sady hanatsarana ny tontolon’ny fampiasam-bola mba hitondra fandrosoana ara-toekarena.
Anisan’ny hampiasana ity vola ity ny fanatsarana ny fampidiran-ketra, 0,6% miohatra amin’ny harinkarena faobe (PIB), ny hampihenana ny fanampiana samihafa amin’ny vola, ary hampihenana hatrany amin’ny 0,8% ny fandaniam-bolam-panjakana tsy mitondra voka-tsoa ho an’ny vahoaka.
Hampiroboroboana koa ny fampiasam-bola, hatsaraina ny fanomezana tsenam-barotra ho an’ny Jirama, ahena ny fotoana fikarakarana disadisa ara-barotra ary hamafisina ny hahamarin-toerana ny banky madinika na mikraofinansa. Andrasana ny vokatra tena mamaha ny fahantrana avy amin’ny fanjakana.